Ubophelelwe kwisithuba saso
Okokuqala, i-Bottom Line
Ukuthi i-Mitsubishi Mirage iye yaxhaswa ngolu hlobo lugxeka nje ngathi i-Titanic yaqalisa ingxaki encinci elwandle. I-Mirage iboshwe kwiposenti yokubhukuda ininzi yenkampani yokunyathelisa imoto, eninzi kakhulu-kwaye uya kuqaphela ukuba ndizibandakanya nakweli qela lokugqibela-uthethile into enhle ngayo. I-2015 Mitsubishi Imoto ibhokisi lokuphucula i-post-to-basics ethembisa into enye kunye nento enye kuphela: I-motor motoring.
Kwaye ke umgxeki wakhe onamandla kakhulu kufuneka avume ukuba ukhulula kwisithembiso eso, nangayiphi indlela efunekayo.
Ixabiso elithengiweyo ukuthenga, elincinci ukuqhuba
Kuyafaneleka kwaye ixhotyiswe kakuhle
Ncitshwankc, nomsindo kunye nongcolileyo
Uphononongo lwengcebiso: 2015 Mitsubishi Mirage
Ndiya kuvuma: Ndikulindele iveki yam nge-2015 Mirage ukuba ibe yinto efanelekileyo. Mna mna nomfazi wam sichitha iinyanga ezintandathu nge-2014 Mirage njenge-tester-long tester kwaye safika ngoluvo olulungileyo, oku kungakhathaliseki ukuba impazamo ebonakalayo imoto. Ngoku, unyaka okanye kangako kamva, andinakuzibuza ukuba, emva kokuba ndiqhube i-Mirage kwakhona, ndiza kufumana i-napkin kwi-collar yam kwaye ndilungele ukutya amagama am.
Njengoko kuvela, iveki yam ne-Mirage yayifana ne-vu vu (kwakhona kwakhona), kwaye kungekhona ngenxa yokuba, ngaphandle kweenguqu ezimbalwa zokutshintsha, imoto endiyivivayo yayifana nokulingana nexesha lethu lovavanyo. Emva kweveki enye, ndifumene iimpazamo ezifanayo kunye neenzuzo ezifanayo-kwaye ndafika ngoluvo olufanelekileyo.
Lapho iMirako iwela emva kwayo
Masijongane nempembelelo yokuqala: I-Mirage iyamangalisa kwaye iphuphe, nangona kungenjalo, mhlawumbi, kwinqanaba elithile labagxeki beentlanzi ezinokuthi bakholelwe. Injini yi-1.2 litre-cyilinda eyenza i-horse power 74, eyenza i-Mirage enye yeemoto ezimbalwa ezithengiswa eMelika zingaphantsi kwe-100 hp.
Iziganeko ezizenzekelayo zihamba ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo (CVT), ezinika ukufikelela kumandla ekuphela kweenjini xa kufuneka. Ngethuba nje umqhubi engesabi ukuvumela i-acceleration pedal kumanga umgangatho wexesha ngezikhathi, i-Mirage ayiyi kuba neengxaki zokugcina i-traffic.
I-Mirage ikhutshwe ngenxa yokusingatha kwayo, okanye kunoko ukusilela kwayo. Ngelixa abaninzi be-automakers bahlalutye ukumiswa kweemoto kwiimarike ezahlukeneyo, i-Mitsubishi isetyenziselwe ukulinganisela enye kwi-Mirage, kwaye yayilungelelaniswe kumazwe anesithathu ehlabathini. Amathayi ahlambulukileyo kunye namancinci awenza amaninzi amaninzi emzimbeni, kwaye ulawulo alukwazi ukuchaneka, nangona kwimeko yongxamiseko i-Mirage iyaya apho ubeka khona. Ngethuba lokuvavanya kwangexesha elide, ndifumene ulawulo lwenza ukuba iindwendwe ezide zihamba ngokukhawuleza, njengoko imoto idinga ukulungiswa rhoqo. Ndahlala kufuphi neveki yokuvavanya, kwaye kwakhona ndafumanisa ukuba i-Mirage iyindlela yokuziphatha engcolileyo, ngelixa ngokuqinisekileyo ingaphumeleli kwimigangatho ye-BMW, ​​yayingekho inokulimaza ekuqhubeni kwansuku zonke, kwaye iphakame ukunyuswa okukhawulezileyo kukuhamba ngokukhululekile.
Lapho i-Mirage ihamba phambili
Ngoko kutheni ndiyathanda le moto imbonakalo engabonakaliyo?
Okokuqala kwaye okubaluleke kakhulu kuqoqosho lwamanzi. Khumbula into endiyithethayo malunga neemfuno zokuba nenkululeko enkulu nge-pedelerator pedal; Izinto ezinjalo ziba nefuthe elibi kwizoqoqosho zamanzi. Nangona kunjalo ndibe ne-40 MPG ngexesha le-week-drive drive, efana ne-Mirage ye-EPA. Kwaye kwakungenako ukuzama. (Ngenye ixesha ndiyenzame ngokwenene kwintlalo-nzuzo ye-hypermiling nxaxheba iChriste; ekuhambeni kweVasgas ukuya eLos Angeles, ndayinisa iMirago ukuya kuma-74.1 MPG. , ungabona ividiyo apha.) Kude naseLos Angeles, apho i-gesi iphindaphinda ibe yindleko njengoko iphela kwilizwe lonke, i-Mirage iya kuqhuba iiveki malunga neekhilomitha ezilishumi elinesibini.
I-Mirage iyinto enhle kakhulu. Ixabiso, njengalowo malunga nantoni naleyo ngemoto, ihlala ingatshintshi ukususela ngo-2014, kunye neemodeli ezisiseko ezisuka kwi $ 13,805 (kuquka iifestile zamandla, izibuko kunye nokukhiya, umoya womoya, kunye nokulawulwa kwemozulu ngokuzenzekelayo) kunye nokuphuma kuma-$ 17,105 ngokungenanto engenanto kunye nokutshabalalisa, I-Bluetooth, kunye ne-optional transmission and automatic navigation system.
Ngaba ungcono kakhulu ngemoto esetyenziswayo?
Uninzi lwabazalwana bam bethetha ukuba ungcono ekuthengeni imoto esetyenziswayo, kodwa andivumi. Enyanisweni, unokufumana into encane kuneMiraphu yemali efanayo, kodwa ungalibali iindleko zokuqhuba. Imoto eneminyaka emithathu inokuthi ibe ngaphaya kwe-warranty yayo ye-bumper-to-bumper, oku kuthetha ukuba nayiphi na indlela yokulungiswa ephakanyisiweyo yimizuzu yomnini. Futhi ungakulibali ukuba imoto enjalo iya kuba malunga nesiqingatha kwisitya sayo sokuqala seebhuleki kunye namathayi. Okwangoku, i-Mirage ihlanganiswe ngumqinisekiso wonyaka wesi-5 / 60,000 wamarandi, oku kuthetha ukuba kwiinyanga ezizayo ezingama-72, umnini-mnikazi kufuneka abe neengxaki zeemoto, i-inshorensi, igesi kunye nokugcinwa rhoqo. (Ngelishwa, ukusweleka kwabathengisi be-Mitsubishi kuthetha ukuba banokuhlawulisa into abayithandayo ngenkonzo, kwaye i-Mirage ye-Mirage ye-7,500 yee-mile yeenkonzo ihamba rhoqo kunezinye iimoto ezininzi, ezihamba ngeekhilomitha ezili-9 000 okanye ngaphezulu kweenguqu zeoli.)
I-Mirage ehamba phambili isendleleni
Gcina ukhumbule ukuba i-Mitsubishi ivume ukungaphumeleli kwemoto kunye nesaziso sokuphuculwa kwenguqu yonyaka we-2017 (ayiyi kubakho i-2016 Mirage). Ukuhlaziywa kufaka ukumiswa kwe-retuned, amabhuleki amakhulu, kunye nokunyuka (kunye nokungaqondakaliyo) ukunyuka kwamandla kwinjinjini, kunye ne-styling ecacileyo kunye ne-stereo engcono (into efunekayo ngokwenene; ). Kananjalo banesimo se-sedan endleleni. I-Mitsubishi iye yavuma kwakhona iinjongo eziqinileyo ze-Mirage: Ixabiso lentengo kunye noqoqosho lwamafutha liya kuhlala kwi-ballpark efanayo.
(Iinkqubo ezintsha zokuvavanya i-EPA zithetha ukuba amanani aya kutshintshwa ngokungaphenduliyo ngo-2017.)
Mirage kunye nehlabathi
Ukhuphiswano kwimakethi enqabileyo-imoto lucacisiwe kodwa luyingozi. Akukho mbuzo, i-best of the bunch is Nissan Versa , eyenzekayo nokuba imoto engabizi kakhulu edayiswa eMelika. I-Versa inendawo engaphezu kweMira, kwaye ngokuqinisekileyo kulungile ukuqhuba; othe, ayikwazi ukuchukumisa i-Mirage ukuba i-oil-to-day uqoqosho lwamafutha (kwimeko yam i-Mirage ephakathi kwe-35 MPG, esele ihle kakhulu). I- Spark ye-Chevrolet iyamnandi, kodwa i-Mirage inikezela indawo engcono yokubuyisela isihlalo kunye noqoqosho lwamafutha. (Inguqulelo entsha ye-Spark yindlela eya ku-2016 kwaye ndiya kuyivavanya ngokukhawuleza.) I- Honda Fit ingaba yinto ehamba phambili kwi-market, kodwa ixabisa kakhulu kuneMi Mirage.
Ngoko ngubani ochanileyo-wam no-othetha nabo okanye nam? Kule meko, mna. Abaninzi bam osebenza nabo baqhathanisa i-Mirage kunye nayo yonke into emakethe, nokuba ingaba isiseko sakho sisisetyenziswe se-BMW 3 okanye i-Toyota Camry, i-Mirage iyakufika imfutshane. Uthelekise nakwezinye iindlela ezintsha zendlela ekhoyo ezikhoyo kwiixabiso lentengo (jonga yonke im apha ), okanye mhlawumbi kusetyenziswe ezinye iindlela (kunye neendleko zazo ezihambelanayo), kwaye uya kubona ukuba iMirago inezinamandla ezicacileyo. I-Mirage ihambisa i-gas efanelekileyo yegesi, ithembeke ngokuqinisekileyo, kunye newaranti epheleleyo. Kwaye ixabiso le-Mitsubishi licela, oko kulungile kum. - uAron Gold
Iinkcukacha kunye neenkcukacha
I-Mitsubishi ye-entry-level hatchback ingatshintshi ngo-2015
Uluhlu lwexabiso (kuquka ukuhlawulwa kwentlawulo): $ 13,805 - $ 17,105
Ixabiso njengoko lihlolwe: $ 17,105
I-Powertrain: i-1.2 ilitha ye-cylinder, i-5-speed manual okanye i -automatic-variable -wheel drive
Uqikelelo lwezoqoqosho lwe-EPA: i-MPG ye-MPG ye-MPG / 42 MPG (umgaqo-nkqubo), 37/44 (ngokuzenzekelayo)
Ukugcinwa koqoqosho lwamafutha: 40.0 MPG
I-Warranty: iminyaka engama-5 / 60,000 i-mile-bum-bumper, iminyaka eyi-10 / 100,000 yamandla
Abadlali abakhulu kakhulu: uNissan Versa , Chevrolet Spark , Honda Fit
Ukwazisa: Isithuthi saloo vavanyo luqhutywe yi-Mitsubishi. Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, nceda khangela iMgaqo-nkqubo Wezolawulo.
Uhlolo lwe-Chevrolet Spark ngo-2016
9 Iimoto Ezinkulu zabaqhubi beZikolo eziPhakamileyo
Ezilishumi zeeMoto eziPhambili zeeDads
Indlela Yokufundisa I-Butterfly Kick
Inkcazo yoMthetho woMfuno
Buyela ehlobo (uMthetho wokuqala)
Indlela yokusebenzisa i-IRS yeNkonzo yeNkonzo yokuBala iRhafu yeNkonzo yokuTyala
Amagqabha amakhulu afunyanwa eMbindi Mpuma?
Bill Bill Clinton Memes
Ukufakwa koMtshini kwi-Deer kunye neminye imidlana enkulu